I-China D-Glucuronolactone Ukukhiqiza nefektri | Ukuxubeka
Igama lesiNgisi: Glucuronolactone; I-D-glucuronolactone
ICAS NO: 32449-92-6
Ifomula Yamamolekhula: c6h8o6
Isisindo Yamamolekhula: 176.1
Umdwebo wesakhiwo samangqamuzana:
Izakhiwo zomzimba nezamakhemikhali:
Ukubukeka: i-crystalline powder emhlophe
Iphuzu lokuncibilika: 170-176 oC
Indawo yokubilisa engu-403.5 oC ku-760 mmHg
Iphuzu le-Flash: 174.9 oC
Okuqukethwe: 98.5% - 102%
I-Glucuronolactonekuyikhemikhali. Kungenziwa ngumzimba. Kutholakala nasekudleni futhi kwenziwa kumalabhorethri.
I-Glucuronolactone iyisithako esithandwayo kuziphuzo zamandla ngoba ikhonjisiwe ukuthi iyasebenza ekukhuphuleni amazinga wamandla nasekuthuthukiseni ukuqaphela.I-Glucuronolactone supplementation inciphisa kakhulu imbangela "yenkungu yobuchopho" ngezimo ezahlukahlukene zezokwelapha. Yize amazinga e-glucuronolactone kuziphuzo zamandla angadlula kakhulu lawo atholakala kukho konke ukudla, i-glucuronolactone iphephe kakhulu futhi ibekezeleleka kahle.I-European Food Safety Authority (i-EFSA) iphethe ngokuthi ukuvezwa kwe-glucuronolactone kusuka ekuphuzeni njalo iziphuzo zamandla akuyona Ukukhathazeka kokuphepha Ileveli ye-glucuronolactone engabonwanga-engemihle yi-1000 mg / kg / ngosuku.
Ngokungeziwe, ngokusho kweThe Merck Index, i-glucuronolactone isetshenziswa njenge-detoxicant.Isibindi sisebenzisa i-glucose ukudala i-glucuronolactone, evimbela i-enzyme B-glucuronidase (ihlanganisa i-glucuronides), okufanele ibangele amazinga egazi-glucuronide ukuthi anyuke. Ama-glucuronides ahlangana nezinto ezinobuthi, njenge-morphine nedepho medroxyprogesterone acetate, ngokuwaguqula abe yi-glucuronide-conjugates encibilikiswa ngamanzi ekhishwa emchameni.Igazi elinamandla kakhulu-i-glucuronides lisiza ukususa ubuthi emzimbeni, okuholele ekutheni kuthiwe iziphuzo zamandla ukukhipha ubuthi emzimbeni. I-glucuronic acid yamahhala (noma i-self-ester glucuronolactone yayo) inomthelela omncane ekunciphiseni ubuthi kune-glucose, [ukucaphuna kuyadingeka] ngoba umzimba uhlanganisa i-UDP-glucuronic acid kusuka kushukela. Ngakho-ke, ukudla okwanele kwe-carbohydrate kunikeza i-UDP-glucuronic acid eyanele yokwehlisa ubuthi emzimbeni, [ukucaphuna kuyadingeka] kanye nokudla okunothe ngoshukela kuvame ukugcwala emazweni athuthukile.
I-Glucuronolactone nayo ihlanganiswe ne-glucaric acid, i-xylitol, ne-L-xylulose, futhi abantu bangakwazi futhi ukusebenzisa i-glucuronolactone njengesandulela sokwakheka kwe-ascorbic acid synthesis
Umsebenzi oyinhloko we-glucuronolactone ukukhulisa umsebenzi wokukhipha ubuthi kwesibindi, ukubuyisa noma ukuthuthukisa ukusebenza kobuchopho, ukulawula ukusebenza komzimba, ukondla isikhumba, ukubambezela ukuguga, ukuthuthukisa i-hypoxia, ukuqeda ukukhathala, nokwenza ngcono amandla wokulawula nokuhlanganisa imisebenzi ehlukahlukene yesitho. Nge-hepatitis ebukhali futhi engapheli, i-cirrhosis, noma yokudla noma yokuqeda ubuthi kwezidakamizwa.
Ukupakisha nokugcina: 25kg amabhokisi.
Izinyathelo zokuqapha: gcina endaweni yokugcina impahla epholile, eyomile nenomoya. Hlala kude nemithombo yomlilo nokushisa. Vikela ekukhanyeni kwelanga. Iphakethe kufanele livalwe futhi livikelwe emanzi.
Isicelo: okufakiwe kokudla, okuphakathi kwemithi
Ukukhiqizwa umthamo: Amathani ayi-1000 / ngonyaka.
Langaphambilini I-Betaine Anhydrous
Olandelayo: IHordenine hydrochloride
Usawoti we-3-Hydroxybutanoic acid calcium
3-Hydroxybutanoic acid magnesium usawoti